Ball Ball Valve - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Ny baolina amin'ny valizy dia manapaka, mandrindra, mizara ary manova ny fitarihan'ny mpanelanelana amin'ny fantsona. Ny valizy valizy dia manana tombony maro ary karazana valizy vaovao ampiasain'ny besinimaro. Ny valve valizy misy fiasa samihafa dia matetika manana sehatra maro samihafa, koa fantatrao ve hoe inona ireo karazana valizy misy valizy eo?
1. Matetika ny spheres dia mizara ho spheres malefaka ary sfera famehezana mafy.
2. Ny sphere blank dia mandray forging, casting ary vy coil welding. Ny fitaovana omena dia: A105, 304, 304L, 316, 316L, LF2, 42CrMo, 1Cr13, F51, Mone1, 17-4PH, sns.
3. Ny baolina dia azo zaraina ho baolina roa-lalana, baolina telo-lalana, baolina efatra-lalana, baolina miolakolaka, baolina mitsingevana, baolina raikitra, baolina miendrika V, hemispherezy eccentric, ball shank, ball solid, ball hollow, sns . araky ny asany. Ary afaka manamboatra baolina tsy marim-pototra isan-karazany ho an'ny mpampiasa.
Fomba famoronana isan-karazany amin'ny sehatra
1. Fomba fanariana: Ity dia fomba fanodinana nentim-paharazana. Ilaina ny fametahana smelting, fandrarahana ary fitaovana hafa feno, ary koa atrikasa lehibe kokoa ary mpiasa marobe, fampiasam-bola lehibe, fizotra maro, fizotran-pamokarana sarotra, ary fandotoana Ny tontolo iainana sy ny haavon'ny fahaizan'ny mpiasa isaky ny dingana dia misy fiantraikany mivantana amin'ny kalitao. ny vokatra. Ny olan'ny famoahana ny pore amin'ny sphere dia tsy azo vahana tanteraka. Na izany aza, lehibe ny tambin-karama fanodinana banga ary be ny fako. Matetika dia hita fa ny lesoka fanariana dia manala azy mandritra ny fanodinana. Raha mitombo ny vidin'ny vokatra ary tsy azo antoka ny kalitao, ity fomba ity dia tsy mety amin'ny ozinina.
2. Fomba forging: Ity dia fomba iray hafa ampiasain'ny orinasa valizy an-trano maro ankehitriny. Izy io dia manana fomba fanodinana roa: ny iray dia ny fampiasana vy boribory hanapahana sy hanafanana hafanana ho banga matevina, ary avy eo hanao fanodinana mekanika. Ny faharoa dia ny mamolavola ny takelaka vy tsy miangatra boribory amin'ny milina fanodinana mba hahazoana banga hemispherical poakaty, izay ampidirina anaty banga boribory ho an'ny fanodinana mekanika. Ity fomba ity dia manana taha ambony amin'ny fampiasana fitaovana, saingy manana herinaratra mahery Ny fitaovana fanaovan-gazety, lafaoro fanamainana sy fitaovana fanamafisam-peo argon dia mitaky vola mitentina 3 tapitrisa yuan hananganana vokatra. Ity fomba ity dia tsy mety amin'ny ozinina.
3. Fomba ahodinkodinana: ny fomba famolahana vy dia fomba fanodinana mandroso tsy misy sombiny ary tsy misy puce, izay an'ny sampana fanodinana tsindry vaovao. Izy io dia manambatra ny toetra mampiavaka ny forging, extrusion, mihodina ary mihodina, ary manana tahan'ny fampiasana fitaovana avo (Hatramin'ny 80-90%), mitahiry fotoana be fikirakirana (1-5 minitra miforona), ary ny tanjaka ara-materialy dia azo hitombo avo roa heny aorian'ny mihodina. Noho ny fifandraisana kely eo anelanelan'ny kodiarana mihodina sy ny fitaovana mandritra ny fihodinana, ny fitaovana vy dia ao anaty fanjakana roa na telo fomba faneriterena, izay mora simba. Eo ambanin'ny herinaratra kely, ny adin-tsaina amin'ny fifandraisana amin'ny vondrona avo kokoa (hatramin'ny 25- 35Mpa), noho izany, maivana ny lanjan'ny fitaovana ary kely ny herinaratra ilaina (latsaky ny 1/5 ka hatramin'ny 1/4 an'ny gazety). Ankehitriny dia eken'ny indostrian'ny valizy any ivelany ho toy ny programa teknolojika fanodinam-bolan'ny angovo, ary azo ampiharina ihany koa ho an'ny fanodinana ireo faritra mihodina hafa. Ny teknolojia mihodina dia be mpampiasa sy novolavolaina tamin'ny hafainganam-pandeha any ivelany. Ny teknolojia sy ny fitaovana tena matotra sy marin-toerana, ary tanteraka ny fanaraha-maso mandeha ho azy ny fampidirana mekanika, herinaratra ary hydraulic.
Ny fandefasana valves-bolantsika dia vita amin'ny fasika mifono, manana endrika tsara tarehy, habe mahazatra ary famolavolana indray mandeha.
ISO5211 Top Flange, Anti Static Devices, tsofy ny porofo manamarina, Hole Balance Pressure In Ball Slot
STANDARD DESIGN: API6D, API608, ASME B16.34, DIN 3357, JIS B2001
MIARA-MIASA: ASME B16.10, DIN 3202, EN 558, JIS B2002
INSPECTON SY Fitsapana: API598, API6D, DIN 3230, EN 12266, JIS B2003
SAFE SAINY: API 607, ISO 10497
Teknolojia fasika mifono avokoa no atsanganay
Famolavolana fitaovana bobongolo ----- Famokarana fitaovana bobongolo ---- savoka tsindry ----- fanamboarana savoka ----- Hazo vondrona ------- akorandriaka (atsoboka) ----- Dewaxing - akorandriaka famonoana-famakafakana simika-fandrarahana-fanadiovana-hafanana fitsaboana-machining-vita vokatra fitehirizana。
Ohatra, amin'ny antsipiriany:
Fanosehana savoka (famolahana tsindrona savoka) --- fanamboarana savoka - fanaraha-maso savoka - hazo vondrona (hazo modely savoka) --- fanamboarana akorany (atsoboka, fasika, avy eo apetaho, ary farany fanamainana ny akoran'ny bobongolo) --- dewaxing (dewaxing etona) --- fanendasana ny akoran'ny bobongolo --- famakafakana simika --- fandrotsahana (fandrotsahana vy anidina ao anaty akorandriaka) --- fitifirana mihetsiketsika --- Fanapahana sy fisarahana fanariana sy tehina --- -Vavahady fitotoana --- Fanaraha-maso voalohany (fanaraha-maso burr) --- fipoahana tifitra --- fametahana --- famafana --- fanaraha-maso vita vita --- Fanaraha-maso
Ny fizotran'ny famokarana casting dia toy izao. Amin'ny ankapobeny, izy io dia azo zaraina ho savoka manindry, fanaovana akorandriaka, fandraraka, fanodinana aorian'ny fanaraha-maso ary fanaraha-maso.
Ny savoka manindry dia misy (savoka manindry, manamboatra savoka, hazo vondrona)
Fanosehana savoka --- Mampiasà milina fanosotra savoka hanaovana lasitra savoka
Manamboatra savoka --- manitsy ny lasitra savoka
Hazo vondrona --- vondrona Lamo ho hazo
Ny fanaovana akorandriaka dia misy (fasika mihantona, slurry mihantona, fanamainana rivotra)
Ny fanodinana aorian'izany dia misy (fanitsiana, fipoahana bala, fipoahana fasika, pickling,)
Ny fandrotsahana rano dia misy (ny fandrahoana sy ny famakafakana simika dia antsoina koa hoe spectroscopy, pouring, vibration shell, fanapahana vavahady ary fitotoan'ny vavahady)
Ny fanodinana aorian'izany dia misy (fipoahana fasika, fanapoahana tifitra, fanitsiana, pickling)
Ny fanaraha-maso dia misy (fanaraha-maso savoka, fanaraha-maso voalohany, fanaraha-maso mpanelanelana, fanaraha-maso vokatra vita)
Fitaovana fanariana: CF8, CF8M, CF3, CF3M, 4A, 5A, 6A, 904L, Monel, Hastelloy, alimo Aluminium